Ukuvikelwa komthengi - Buka i-Rapport
Buka ukuvikelwa komthengi we-Rapport
Ukuphuma okuthembekile okungu-100%
Imibuzo evame ukubuzwa ngokuvikelwa komthengi
Ingabe ukuvikelwa komthengi kumahhala?
Yebo. Ukuvikelwa komthengi kukhululekile ngo-100%
Ingabe ukuvikelwa komthengi kusebenza kukho konke okwenziwayo?
Yebo. Konke okwenziwayo kuvikelwe ku-AZ.
Ngabe ukuvikelwa komthengi kusasebenza uma ngithenga iwebhusayithi?
Ngeshwa akunjalo. Uma ususa ipulatifomu, awukufanelekele ukuvikelwa komthengi.
Ngabe ukuvikelwa kwe-buye kusebenza kuwo wonke amasayizi wokuthengiselana?
Ukuvikelwa komthengi kusebenza kukho konke ukuthengiselana okufika ku- $ 2M.
Ukuvikelwa komthengi okuqinile embonini.
Vikela ukuthenga kwakho ngokuvikelwa komthengi kwamahhala kwe-Watch Rapport: Abathengisi abaqinisekisiwe, inketho yokukhokha ephephile, kanye nesiqinisekiso se-Authenticity.
Izithombe ezinhle kakhulu zokuvikelwa komthengi
Uhlu Oluqinisekisiwe Nabathengisi
Ukuthenga amawashi kuyindaba yokwethembana. Kungakho uqobo lwethu siqinisekisa konke ukufakwa kuhlu noma ukuthengisa kusetshenziswa izindlela eziqinile ngaphambi kokuba sibhale amawashi ku-Watch Rapport.
Ukukhokha nge-Checkout Trustout
Inani elikhokhwayo likhokhwa ngqo kwiWatch Rapport, lapho igcinwa iphephile uze ube newashi lakho lamaphupho ezandleni zakho. Checkout Othenjwayo MAHHALA. Konke ukufakwa kuhlu kunikela ngokucubungula inkokhelo nge-Checked Checkout.
Sihlanganyele ne-EnGarde ukuhlinzeka ngembozo eyengeziwe yokuthumela. Ungakhetha ukwengeza ukumbozwa kokuthumela ekuphumeni ngemali ephansi.
Uma unokungabaza ngobuqiniso bewashi elithengwe ku-Watch Rapport, xhumana nathi zingakapheli izinsuku ezingama-30 uthole i-oda lakho. Sizokusiza ukuthi uthole isisombululo esanelisayo ngokushesha. Esimweni esingalindelekile ukuthi umuntu angatholakali, uzobuyiselwa imali yakho.
Ukusekela okwenziwe ngezifiso ngezilimi eziningi
Esimweni esingavamile lapho okuthile kungahambi njengoba kuhlelwe, ungathembela kuthimba lethu lesezingeni lomhlaba lamakhasimende. Sizokusiza ukuthi uthole isisombululo esanelisayo ngokushesha.
Uma iwashi lingalethwanga noma liphambuka encazelweni, ungathola imbuyiselo ephelele. Lapho usulikhanselile i-oda futhi walibuyisa iwashi, uzobuyiselwa imali yakho.
Abacwaningi mabhuku abazimele kanye nochwepheshe bazoqinisekisa ikhwalithi nobuqiniso okokuqala kwewashi (ama) lakho. Ngeminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho ekuhloleni le mikhiqizo kuzobheka ukuqinisekisa ukuthi konke ukufakwa kombala, ukumbozwa, ukumakwa, izingxenye, ubucwebe, izinsimbi, izilinganiso, ukufakwa, nemininingwane emihle kwenzelwa imininingwane yokuqala yokwenziwa.
Amakhasimende ethu ayasithanda
Silwela ukugcina umlando ongenaphutha. Bona ukuthi kungani amakhasimende ethu esithanda. Kubalulekile kithi ukwakha umphakathi ophephile futhi othembekile womkhakha wokubuka okunethezeka. Izisekelo zethu kanye nenani eliyinhloko ukwethembana nokuphepha.
Ukuvikelwa okudingayo, ukuthula kwengqondo kukufanele
Imininingwane yakho yezezimali
I-Watch Rapport izogcina ukuthengiselana kwakho kuvikelekile ngokungabelani ngemininingwane yakho yezezimali noma yomuntu siqu nabathengisi bethu.
Siqapha ukuthengiselana 24/7. Lokho kufanele kukusize uphumule kalula.
Umbhalo wethu wokubethela ugcina ukuthengiselana kwakho ku-inthanethi kugadiwe kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Xhumana nathi uma ubona uhlu olusolisayo, singakusiza ukuthi uzivikele ekuthengisweni okukhohlisayo.
Thenga ku-inthanethi ngaphandle kokukhathazeka
Ukuphuma okuqinisekisiwe okuphephile nokuvikelekile. Imisebenzi ebetheliwe ebhaliwe zonke izinyathelo zendlela.
Amaqiniso Wokuvikelwa Komthengi
Ukuvikelwa komthengi kwamahhala kwenza ukuthenga kwakho kungakhathazeki ku-inthanethi.
I-Watch Rapport ibilokhu ichaza kabusha ukuhweba ngamawashi okunethezeka nokubeka izilinganiso ezintsha. Izipho zethu nedumela landa ngokushesha emhlabeni wonke. Abantu abanolwazi kakhulu basebenza nsuku zonke ukwenza ngcono indawo yethu yezimakethe futhi banikele ngamakhasimende asezingeni lomhlaba kubathengi nakubathengisi bamawashi okunethezeka.
Sinomhlane wakho zonke izinyathelo zendlela.
Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali
Ukuvikelwa komthengi okuqinisekisiwe
Ukuvikelwa ongathembela kukho
Uma ungayitholi into oyi-ode, noma ibonakala ihluke kakhulu kunencazelo yayo, ufanelekela Ukuvikelwa Kokuthengwa, futhi sizokubuyisela ngentengo ephelele yokuthenga kanye nanoma yiziphi izindleko zokuthumela, ngokuya ngemigomo nemikhawulo.
Okumbozwe ngokuvikelwa kokuthengwa kwe-Watch Rapport
Esikumbozayo ezimweni ezingavamile ukuthengiselana kwakho akukhona njengoba kuchaziwe.
Uthenge iwashi kodwa uthole indandatho
Uthenge into echazwe njenge- “entsha,” kodwa uthole okuthile okusetshenzisiwe
Uthenge izinto ezi-3, kodwa wamukela ezi-2 kuphela
Into yoniwe ngesikhathi ithunyelwa
Into ayinazo izingxenye ezikhonjwe ngenye indlela
Uthenge into kodwa esikhundleni salokho wathola ukungqongqoza
Iminyaka eyi-100 + isipiliyoni esihlanganisiwe
Enye yezimakethe ezihola phambili zokubuka okunethezeka
Izinkulungwane zabathengisi emhlabeni jikelele
Abathengisi abavela emazweni angaphezu kwekhulu
Izivakashi ezingama-45,000 ezihlukile
Izinkulungwane zezivakashi ngosuku futhi zikhula
Imikhiqizo engama-680,000+ efakwe ohlwini
Izinkulungwane zokubukwa kwamawashi
2B + ekufakweni kokuxhuma
Izigidi zamawashi esewonke ngenani
Ukuhlinzeka ukwesekwa okusezingeni lomhlaba 24/7
Insizakalo yamakhasimende engenakuqhathaniswa
Buka i-Rapport ngezinombolo
Buka Ukulandelwa Kwezinombolo
Buka imakethe kusukela ngo-2013
Inani eliphelele lemikhiqizo efakwe kuhlu
Thenga uthengise amawashi emhlabeni jikelele
Thenga uthengise ngokuphepha, futhi ngokuphepha emhlabeni wonke. Isibopho seZero, nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
Konke okwenziwayo kumbozwe ngokugcwele ngokuvikelwa komthengi we-Watch Rapport.
Isikhulu senkonzo saba usizo olukhulu. Angithandanga iwashi lokuqala engili-ode. Ungisizile ngokuthumela iwashi emuva nokuthola iwashi engilithandayo. Insiza enhle! Ngokuqinisekile uzoba yikhasimende eliphindayo !!
Ngithenge lapha amahlandla ambalwa. Inikeza izinto ezintofontofo ukugqoka. Leyo into engishaya kakhulu ngaleli washi. Ikhwalithi engasindi futhi enhle kakhulu. Ukudayela kukhululekile futhi kuyacaca. Inamamaki wehora le-radium asiza ekutsheleni isikhathi ebumnyameni. Umucu wonke uyisikhumba sekhwalithi enhle futhi unethezeke kakhulu. Ngijabule kakhulu ngeqiniso lokuthi iwashi lekhwalithi enhle kangaka lithengiswa ngentengo ephansi yiWatch Rapport.
Ngithengile amawashi amaningana ngesayithi ngaphambili futhi ukuthenga ngakunye kuhambe kahle impela. Ngikuthanda ukuphepha, ukukhululeka kokuqonda igxathu negxathu okufanele ukwenze nendlela leyo nkokhelo “ebanjwe ngayo” uze uqinisekise ukuthi konke kulungile. Ngalesi sikhathi ngathenga iHublot entsha futhi ngathatha isinqumo sokusebenzisa indlela efanayo nayo yonke into yasebenza njengakuqala. Ngijabule kakhulu nge-Watch Rapport futhi ngijabule nakakhulu ngewashi lami elisha.
insizakalo enhle, enhle, enesizotha, ehlakaniphile futhi eyimfihlo, eyamukela ngokweqile, ehloniphekile futhi ekhululekile. Ukuphathe ukuthengiswa kwewashi lami elikhazimulayo ngokusebenza kahle okukhulu, kungiqondisa othayilesi wokushintshanisa isikhathi njengengxenye. Sizokwenza ibhizinisi ndawonye futhi.
Ngalesi sikhathi, samukela kuphela ukudluliswa ngezintambo kwebhange njengendlela yethu yokukhokha.